အဘယ်ကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည် Facebook တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့် | Gadget သတင်း
ငါမကြာသေးခင်ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ၊ လူမှုမီဒီယာအပေါ်မဟာဗျူဟာလူမှုရေးမီဒီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုခြေရာခံရန် mechan ည့်ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကဖော်ပြခဲ့သည်။
ဖတ်ပြီးသောအချက်များအရ၊ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာမကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများအရစားသုံးသူ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း - အွန်လိုင်း - ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကိုးကားချက်များကိုရှာဖွေသည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသောလိမ်လည်မှုနှင့်မကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ငါဟာဒီကုမ္ပဏီကမကောင်းတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သတင်းပို့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါစိတ်ဝင်စားတဲ့ထုတ်ကုန်ကောင်းကောင်းမကောင်းဘူးလားဆိုတာရှာဖွေတာဟာငါ့အတွက်အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။
ပြီးတော့ Facebook ကနာမည်ကောင်းဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့နာမည်ကိုခွဲခြားနိုင်တယ်။
2 Facebook ကကုမ္ပဏီတွေအတွက်ဘယ်လောက်အသုံးဝင်လဲ။
3 Social Media တွင်ကုန်ပစ္စည်းအားယုံကြည်စိတ်ချရသည့်မူဘောင်တစ်ခုတွင်စားသုံးသူ၏မျက်လုံးများတွင်ထည့်ရန်
4 အသုံးပြုသူများသည်ကမ်းလှမ်းထားသောထုတ်ကုန်များမှ buzz ကိုထုတ်လုပ်ရန်အားပေးနိုင်ပါသည်
တကယ်တော့နေ့တိုင်း Facebook ဟာသူ့ဟာသူမျှတတဲ့ထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ထူထောင်နေတာကပိုသိသာထင်ရှားတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူအများစုသည်ဖျော်ဖြေရေးရှာဖွေမှုတွင်အမှန်တကယ်ရှိနေသော်လည်းဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမျှဝေရုံမျှမကအမှန်ပင်။ နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအင်တာနက်မှတဆင့်ရယူခြင်းသည်လူသန်းပေါင်းများစွာ၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာတက်ကြွသော Facebook သုံးစွဲသူများ။
မကောင်းတဲ့အရည်အသွေးရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိမ်လည်ခံထားရတဲ့ဘယ်သူ့ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ရဲ့လေလေးစင်းကနေလေတိုက်နှုန်းလေးခုထဲကကြွေးကြော်ချင်မှာလဲ။ လူအနည်းငယ်ကဤသွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်လိမ့်မည်။ အနာဂတ်တွင် Facebook သုံးစွဲသူများသည်ထိုကိရိယာ၏လွှမ်းမိုးမှုအလားအလာကိုသဘောပေါက်လာသည်နှင့်အမျှကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သောအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအကြံပြုချက်များကို - မကြာခဏတွေ့ရလိမ့်မည်။ ။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဈေးကွက်တွင်ပေါ်လာသည့်အခါသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းကထိုအချိန်ကရှိခဲ့သည့်အလားတူပင်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်အဆက်အသွယ်သည်“ မျက်နှာချင်းဆိုင်” ဖြစ်သည်ဟူသောခြားနားချက်နှင့်အတူ၊
၎င်းသည်လူမှုရေးကြော်ငြာများကိုရယူရန်သာမက Google search engine နှင့်အလားတူသော်လည်း၊ Adsense မှတဆင့် SERP များ၏ကျွန်စနစ်ကိုဖြတ်သန်းခြင်းနှင့်တူသည်။ သို့သော်ဂူးဂဲလ်နှင့်မတူသည်မှာ Facebook ၏အားသာချက်များမှာရာထူးဖြင့်သာကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ကသုံးစွဲသူများနှင့်စားသုံးသူအဆက်အသွယ်၊ C2C နှင့်အားဖြည့်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီးစီးပွားရေးမော်ဒယ်သစ်များကိုအီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပါရာဒိုင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်အားထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သောလူ (သူငယ်ချင်းများ) ကြားသတင်းအချက်အလက်ကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ဝေစေသောအခြေခံနိယာမကိုအခြေခံသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီများအသုံးပြုသင့်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှသောအခါ၎င်းသည်အလွန်ရင်းနှီးသောဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်? အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်
Social Media တွင်ကုန်ပစ္စည်းအားယုံကြည်စိတ်ချရသည့်မူဘောင်တစ်ခုတွင်စားသုံးသူ၏မျက်လုံးများတွင်ထည့်ရန်
လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကကုန်ပစ္စည်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်လွယ်ကူသည် ရိုးရာမီဒီယာတွင် ၀ ါဒဖြန့်ချိမှုသည်ထိရောက်သောကြောင့်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ကိုတွက်ချက်ရန်လွယ်ကူသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာသူများသည်ကုန်ပစ္စည်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုချဲ့ကားပြောဆိုလေ့ရှိသော်လည်းလူအများအတွက်မူခြားနားချက်ကိုပြောပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ယနေ့နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သောပမာဏအရအများပြည်သူသည်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကထက် ပို၍ ဝေဖန်။ ပိုမိုသိရှိလာသည်။ စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်ပြောရန်မလွယ်ကူတော့ပါ၊ အကြောင်းမှာအလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူသည်ရှာဖွေမှု၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ်သာဖြစ်လိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ဟုတ်မှန်သည်၊ မဟုတ်သည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ဥပမာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအားယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအားသာချက်တစ်ခုပေးသည်။ စားသုံးသူအနေဖြင့် Juan Pérezမှထုတ်ကုန်သည်အလွန်ကောင်းကြောင်းသက်သေပြကြောင်း၊ Iván Cadena ၏ Facebook ဘုတ်အဖွဲ့တွင်သူသည်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ပြီးကောင်းမွန်စွာလုပ်ခဲ့ကြောင်းရေးသားထားသောစာတစ်စောင်ကိုတွေ့မြင်ကြောင်းကြေငြာသောကြော်ငြာကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ကွဲပြားသည်။ Iván Cadena သည်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါကများစွာပိုများသည်။
အသုံးပြုသူများကိုထုတ်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းနိုင်ပါသည် ဆူညံသံ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထုတ်ကုန်များ၏
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် - ငါသာဆိုလိုတာက - Ecommerce ဆိုဒ်များအတွက်ထိုဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုလဲ? ငါဆက်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှု၏ဤအမျိုးအစားလွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းနှင့်အားပေးဖို့နည်းလမ်းများစွာစဉ်းစားနိုင်ပေမယ့်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Facebook ၏ဖွင့်ထားသည့် APIs များကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစားသုံးသူအားကုန်ပစ္စည်းနှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ပရိုဖိုင်းသို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်ခွင့်ပြုသည့်ဝစ်ဂျက်သို့မဟုတ်ပလပ်အင်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်မည်သူမဆိုစဉ်းစားမိပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » အဘယ်ကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည် Facebook တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါတယ်